Iinkcukacha zeMveliso Umgaqo osebenzayo we-hydraulic jack kukuba isitshixo siqhubela ipiston encinci phezulu. Ioyile kwitanki yeoyile iyatsalwa ingene kumazantsi episton encinci ngombhobho weoyile kunye nendlela yendlela enye. Xa utsalo ucinezelwe ezantsi, ipiston encinci iyavalwa yivelve yendlela enye. Ioyile esezantsi kwepiston encinci icinezelwe kwinxalenye esezantsi yepiston enkulu ngokujikeleza kweoyile yangaphakathi kunye nevalve yendlela enye, kunye nenxalenye esezantsi yepisto encinci ...
Iinkcukacha zeMveliso Isitishi se-hydraulic 1. Inkqubo yokulawula i-hydraulic, ukugcina amandla kunye nokukhuselwa kwendalo. 2. Inkqubo engqongqo yoyilo iqinisekisa ukusetyenziswa kwamandla okuphezulu. 3. Ingxolo ephantsi, akukho kuvuza. 4. Amacandelo aphambili ziimpawu ezaziwayo zamanye amazwe, inkqubo ekhuselekileyo nezinzileyo. 5.Ubume beCompact, amandla amakhulu, ukusebenza rhoqo. 6. Onke amacandelo aqinisekisa ukutshintshiselana okuhle kunye nenqanaba lokuqalisa eliphezulu. Gcina linyathelo elibalulekileyo lokulawula ungcoliseko lweoyile ...
Hydraulic Amandla Unit
Iinkcukacha zeMveliso yeCandelo le-Hydraulic power is a micro integrated station. Yenziwe yimoto, impompo yeoyile, ibhloko yevalve edityanisiweyo, ibhloko yevalve ezimeleyo, ivelufa yeHydraulic kunye nezixhobo ezahlukeneyo zamanzi (njengesiqokeleli). Xa kuthelekiswa nesikhululo esiqhelekileyo se-hydraulic esinomgaqo ofanayo, sinezinto eziluncedo kulwakhiwo lwecompact, umthamo omncinci, ubunzima bokukhanya, ukusebenza kakuhle, ukusebenza okuthembekileyo, inkangeleko entle, akukho ukuvuza kunye nexabiso eliphantsi. Okwangoku, le mveliso iye b ...
Iinkcukacha zeMveliso 1: IWeirun inenkqubo epheleleyo yolawulo lwenzululwazi yamalungu eemoto kunye nezinto. Shandong weirun Auto Izahlulo Co., Ltd. yamkelwe kolu shishino ngenxa ingqibelelo, amandla kunye nomgangatho imveliso. Wamkele izihlobo kuzo zonke iinkalo zobomi ukutyelela, ukukhokela kunye nothethathethwano lweshishini. Inkampani yethu yinkampani yemveliso yokukhuphisana. Iimveliso eziphambili iintlobo ezahlukeneyo linings waqhekeza. Kufanelekile kuzo zonke iintlobo zobuncinci, ukukhanya kunye nomsebenzi onzima.
Iinkcukacha zeMveliso 1.Ubume besikere jack Buqulethe isiseko, isibini seengalo ezixhasayo ezisezantsi, isibini seengalo ezixhasayo, izali, iibheringi zeenqwelomoya, amandongomane, ukuzala, isikhonkwane sepini kunye nentonga yokujija. Imiphetho yesibini seengalo ezixhasayo ziguqulwe zangena ngaphakathi zaba lukhuni, kwaye iziphelo zazo zenziwa zaba ziigiya kunye nemeshed; Imiphetho yeengalo ezisezantsi ezixhasayo ziguqulwe zangaphandle zaba ziimbambo zokomeleza, kwaye iziphelo zenziwa zaba ngamavili egiya kunye nemeshed. 2. Umgaqo wesikere jack ...